Akụkọ Bible: Jizọs Alaghachi n’Eluigwe - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
KA ỤBỌCHỊ na-aga, Jizọs gosiri ụmụazụ ya onwe ya ọtụtụ ugboro. N’otu oge, ihe dị ka narị ndị na-eso ụzọ ya ise hụrụ ya. Mgbe ọ pụtara n’ihu ha, ị̀ ma ihe ọ gwara ha okwu ya? Ọ bụ Alaeze Chineke. Jehova zitere Jizọs n’ụwa izi ihe banyere Alaeze ahụ. Ọ nọgidekwara na-eme nke a ọbụna mgbe a kpọlitesịrị ya n’ọnwụ.
Ì chetara ihe alaeze Chineke bụ? Alaeze ahụ bụ ọchịchị Chineke nke dị n’eluigwe, Jizọs bụkwa Onye Chineke họpụtara ịbụ eze. Dị ka anyị mụworo, Jizọs gosiri ụdị eze ọma nke ọ ga-abụ site n’inye ndị agụụ na-agụ nri, ịgwọ ndị ọrịa, na ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ!
Ya mere, mgbe Jizọs ga-abụ eze n’eluigwe ruo otu puku afọ, gịnị ka ụwa ga-adị ka ya? A ga-eme ka ụwa dum bụrụ paradaịs nke mara mma. Agha ma ọ bụ mmebi iwu ma ọ bụ ọrịa ma ọ bụ ọbụna ọnwụ agaghị adịkwa ọzọ. Anyị ma na nke a bụ eziokwu n’ihi na Chineke mere ụwa ịbụ paradaịs nke ndị mmadụ ga-enwe obi ụtọ na ya. Ọ bụ ya mere o ji mee ogige Iden ná mmalite. Jizọs ga-ahụkwa na e mezuru ihe Chineke chọrọ ka e mee.
Oge eruwo ka Jizọs laghachi n’eluigwe. Ruo ụbọchị iri anọ, Jizọs anọwo na-egosi ndị na-eso ụzọ ya onwe ya. Ha wee mara na ọ dị ndụ ọzọ. Ma tupu ọ hapụ ha, ọ gwara ha, sị: ‘Nọdụnụ na Jeruselem ruo mgbe unu ga-anata mmụọ nsọ.’ Mmụọ nsọ bụ ike ọrụ Chineke nke dị ka ifufe, ma ọ ga-enyere ụmụazụ ya aka ime uche Chineke. N’ikpeazụ, Jizọs sịrị ha: ‘Unu ga-ekwusa banyere m ruo n’akụkụ kasị anya nke ụwa.’
Mgbe Jizọs kwusịrị nke a, ihe dị ịtụnanya mere. Ọ malitere ịrịgo n’eluigwe, dị ka ị pụrụ ịhụ n’ebe a. Igwe ojii wee kpuchie ya, mee ka ndị na-eso ụzọ ya gharazie ịhụ ya. Jizọs gara eluigwe, o wee malite ịchị ụmụazụ ya nọ n’ụwa site n’ebe ahụ.
1 Ndị Kọrint 15:3-8; Mkpughe 21:3, 4; Ọrụ 1:1-11.
N’otu oge, ọ̀ bụ ndị na-eso ụzọ ole hụrụ Jizọs, gịnịkwa ka ọ gwara ha okwu ya?
Gịnị bụ Alaeze Chineke, oleekwa otú ndụ ga-adị n’ụwa mgbe Jizọs ga-amalite ịchị dị ka Eze ruo otu puku afọ?
Ò ruola ụbọchị ole Jizọs nọworo na-apụta n’ihu ndị na-eso ụzọ ya, ma oge o ruola ka o mee gịnị?
Nwa obere oge tupu ya ahapụ ndị na-eso ụzọ ya, gịnị ka Jizọs gwara ha ka ha mee?
Gịnị na-eme na foto a, oleekwa otú e si kpuchie Jizọs ka anya ghara ịhụ ya?
Gụọ 1 Ndị Kọrint 15:3-8.
N’ihi gịnị ka Pọl onyeozi ji nwee nnọọ obi ike ikwu okwu banyere mbilite n’ọnwụ Jizọs, oleekwa ụfọdụ ihe Ndị Kraịst pụrụ iji obi ike kwuo banyere ha? (1 Kọr. 15:4, 7, 8; Aịsa. 2:2, 3; Mat. 24:14; 2 Tim. 3:1-5)
Gụọ Ọrụ Ndịozi 1:1-11.
Olee ebe e kwusaruru ozi ọma ahụ, dị ka e buru n’amụma n’Ọrụ Ndịozi 1:8? (Ọrụ 6:7; 9:31; 11:19-21; Kọl. 1:23)